19 aogositra – araben’ny Fahaleovantena : miantso ny vahoaka hidina an-dalambe ny AFP | NewsMada
19 aogositra – araben’ny Fahaleovantena : miantso ny vahoaka hidina an-dalambe ny AFP
Par Taratra sur 11/08/2016
Hanao ahoana ihany ny ho tohin’ny toe-draharaham-pirenena? Miantso ny vahoaka hidina an-dalambe eny amin’ny araben’ny Fahaleovantena ny Antso ho fanavotam-pirenena (AFP) amin’ny 19 aogositra.
“Miantso ny vahoaka malagasy rehetra ny AFP amin’ny 19 aogositra ho tonga marobe eny amin’ny kianja na ny araben’ny Fahaleovantena, manomboka amin’ny 9 ora sy sasany, hanohizantsika ny tolona.”
Fanambaran’ny mpandrindra nasionalin’ny Antso ho fanavotam-pirenena (AFP), Razafimanantany Faniry, teny Andavamamba, omaly, io. Misy dikany ara-tantara ny araben’ny Fahaleovantena. Mila mamerina ny Fahaleovantena marina isika Malagasy.
“Ny tolona entinay, tsy ho anay irery… Tanora avokoa izahay ato, hijoro amin’izany famerenana ny tena Fahaleovatenan’i Madagasikara izay”, hoy izy. Tsy hangataka fahazoan-dalana amin’io hetsika io izy ireo.
“Antsika ny tany ary ny vahoaka no tompon’ny fahefana”, hoy ihany izy. Iza no nanao hetsika nangataka fahazoan-dalana, ka tsy nahazo? Heverin’ny AFP fa fandaniam-potoana izany. Fa amin’ny 19 aogositra ny fotoana…
Hetsi-bahoaka io. Satria milaza ny filoham-pirenena hoe: “Porofoy amiko fa mahantra sy sahirana ny vahoaka.” Hitondra porofo mivantana aminy amin’ny alalan’io hetsi-bahoaka io ny AFP, hijoro hiaro ny tanindrazana miaraka amin’ny vahoaka amin’izay resy lahatra amin’izany.
Notsiahiviny fa famarotan-tanindrazana ny momba an’i Soamahamanina, Bealalana, Mandritsara, Tanambe any Amparafaravola… Manomboka amidy sy omena ny vahiny ireo orinasam-bahoaka amin’izao fotoana izao.
“Tsy maintsy miara-mandresy ny maizina ny vahoaka malagasy iray manontolo. Tsy ekentsika ary tsy nifanarahana amin’ny mpitondra amin’izao fotoana izao ny fanapotehana ny firenena”, hoy hatrany izy.
Tapitra ny fe-potoana nomena ny filoha
Mbola nandroso vahaolana fiala-nenina ho an’ny filohan’ny Repoblika izay nivantanan’ny antso ny AFP, ny 22 jona: tokony hamindram-pahefana araka izay voalazan’ny lalàmpanorenana. Heverin’izy ireo fa tokony ho vita tao anatin’ny 30 andro io soso-kevitra io, famindram-pahefana amin’ny filohan’ny Antenimierandoholona.
Dila ny fe-potoana, namono sofina sy tsy nihaino ny mpitondra niantefan’ny antso. Efa samy nanaovany fitondrana bemarenina ny fikambanana, fiarahamonina sivily, vondrona… Maro ny hafa efa nitrangan’izany: ny vahoaka mitaraina noho ny delestazy, halatra tany, tsy fandriampahalemana, ny vaky fasana, vono olona, doro trano, fanafihana, halatra lakolosim-piangonana, halatra taovana… “Tsy maintsy faranana faran’izay haingana izao fitondrana izao”, hoy ny AFP.
Tsy hampangain’ny mpitondra ho fanakorontanana sy fanonganam-panjakana indray ve izao? Azo antoka, hameno tanàna izaitratra indray ny mpitandro filaminana: hirongo fitaovam-piadiana, misy hisaron-tava…